Iindaba -iValves zenkqubo yoxinzelelo lwe-hydrogenation
Ivalves yenkqubo yoxinzelelo lwe-hydrogenation
Itekhnoloji yeHydrogenation yepetroleum yinkqubo ebalulekileyo kwimveliso yepetroleum, eguqulweyo kunye nokulungiswa kweoyile enzima. Ayiphuculi kuphela ubunzulu benkqubo yesibini yeoyile ekrwada kunye nenqanaba lokufumana kwakhona i-hydrocarbon elula, kodwa ikwonyusa umgangatho weoyile yamafutha kunye nokunciphisa ungcoliseko lokusingqongileyo. Ke ngoko, ukunyanga i-hydro, ukuqhekeka kwe-hydro okanye i-Residue hydro treatment kunye nezinye iinkqubo ze-hydrogenation ziye zaba yinto ebalulekileyo yeyunithi yokucoca. Icandelo leHydrogenation likumngcipheko womlilo odidi A, ziimpawu eziphambili zobuchwephesha ngamaqondo obushushu aphezulu, uxinzelelo oluphezulu, ukulungiswa kwehydrogen. IHydrogenation valves ephezulu yoxinzelelo zezi: itekhnoloji ephezulu, iimfuno ezingqongqo zomgangatho, ukhuseleko kunye nokuthembeka.
Ivalves yoxinzelelo oluphezulu lwe-hydrogenation inezi zinto zilandelayo, ukongeza kwimisebenzi yezivalo eziqhelekileyo:
Ukuphelisa ukukhutshwa okubalekayo kwaphakathi ukuqinisekisa ukusebenza ngokutywina kwevalve, uhlobo loqhagamshelo lomzimba kunye nesiqu sifakwa kuxinzelelo olutywiniweyo, kunye nebhonethi, iringi yokutywina kunye nentsimbi enezinto ezine, njl.njl. kuthintele ukuvuza.
Umzimba uhlalutyo loxinzelelo phantsi kwenqanaba lokusebenza kunye nesoftware yohlalutyo lwe-ANSYS, kwaye ikona yommandla woxinzelelo lwenziwa uhlalutyo loxinzelelo lwefilimu ukuqinisekisa ukukhubazeka komzimba, ukuthintela ukuvuza kwangaphakathi.
Ukupakisha kuyigrafite esulungekileyo (umxholo wekhabhoni omsulwa ≥95%) kunye nokugqobhoza intsimbi engenasici yentsimbi eyenziwe ngegrafite evela kwiNkampani yase-US GARLOCK. Ukuxinana kwendandatho yegraphite esele yenziwe ingu-1120kg / m3. Kwaye konke ukupakisha kunento yokuthintela umhlwa. Umxholo wesakhono sokucoca ulwelo oluyi- <100ppm apho inezinto zokuncamathelisa, izinto zokuthambisa kunye nezinye izongezo, ukuthintela ukubola kwesiqu nge-CI kunye nokukhutshwa okubalekayo kwesixhobo.
Inkqubo eyahlulayo yamalungu oxinzelelo asekwe kwinkqubo yokuphosa uvavanyo lokuthobela, ene-100% yovavanyo olungonakalisi. Imveliso egqityiweyo yokuphosa iyahambelana neemfuno zobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lwevalvu ye-hydrogenation; Machining kunye nendibano ngokungqongqo ukunyanzeliswa processing kunye nenkqubo inkqubo.
Ubungakanani 2 "~ 24"
Inqanaba Udidi 600 ~ Udidi 2500
Umgangatho woyilo API 600, API 6D, BS 1873, ASME B16.34
Uvavanyo kunye novavanyo API 598, API 6D, ISO 5208, ISO 14313, BS 5146
Izinto zomzimba Intsimbi yeCarbon, i-Stainless, i-Alloy Steel, i-Duplex Steel
Umsebenzi Ivili lesandla, iGiya, iMoto, iPneumatic
Qaphela: Ubungakanani be-serial valve yokuxhuma i-flange ingayilwa ngokwemfuno zabathengi.